ओमकार टाइम्स कोपा अमेरिका खेल्ने अर्जेन्टिनाको टोली घोषणा को को परे? - OMKARTIMES
कोपा अमेरिका खेल्ने अर्जेन्टिनाको टोली घोषणा को को परे?
एजेन्सी । ४७औँ संस्करणको दक्षिण अमेरिकी फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका खेल्ने अर्जेन्टिनाले आफ्नो टोली घोषणा गरेको छ । अर्जेन्टिनाका मुख्य प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनीले २८ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन् ।